Fandresena fandresena ny fifanarahana fampanofana-mando
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fandresena fandresena ny fifanarahana fampanofana-mando
Ny mpanamory Eoropeana dia mandray ny fanovana ny lalàna mifehy ny fifanarahana fampanofana an-tsokosoko eo amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka UE sy ny mpitatitra firenena faha-3 nifanarahan'ny Andrimpanjakana EU tamin'ny fivoriana 'Trilogue' omaly hariva.
Ny leasing-mando dia fandaharana ahafahan'ny kaompaniam-pitaterana iray (ny mpampindram-bola) manome fiaramanidina, ekipazy feno, fikojakojana ary fiantohana ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa na karazan'orinasa hafa miasa amin'ny maha broker ny dia an'habakabaka (ny mpampanofa), izay mandoa ora arak'asa.
Ny lahatsoratra 13 nohavaozina ao amin'ny EU Reg. 1008/2008 dia hamela ny Vondrona Eropeana hanainga ny fetra efa misy amin'ny fampanofana-tany (izany hoe ny fanofana fiaramanidina miaraka amin'ny ekipa) ary hamahana ny fifanolanana misy eo amin'ny EU sy Etazonia. Mandritra izany fotoana izany, ny fanitsiana dia hisorohana ny fametrahana fiaramanidina mpamorona tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny EU izay misy ny fampanofana an-tsena toy ny orinasan-trondro banga, fananana fiaramanidina iray na roa ihany, raha ny hafa kosa dia ampanofaina lena avy amin'ny firenena faha-3. Raha tsy nisy io fanitsiana io dia mety ho nanimba tanteraka ny fiatraikany amin'ny fari-pahaizana momba ny asa sy ny kalitaon'ny EU.
"Tianay ny midera ny ezaky ny Komitim-pitaterana an'ny Parlemanta eropeana, ny Rapporteur an'ny vondrona S&D amin'ity rakitra ity - Ramatoa Tapardel - sy ireo manampahefana ao amin'ny fanjakana mpikambana", hoy ny filohan'ny ECA, Dirk Polloczek. "Ny fandraisan'anjaran'izy ireo dia zava-dehibe amin'ny fisorohana ny loza ateraky ny fiovana tsikelikely, saingy ny fanoloana ny asa eropeanina sy ny kalitaon'ny fiaramanidina mpiasan'ny fiaramanidina faha-3. Ny tolo-kevitry ny Vaomiera tany am-boalohany dia nanana ny fahafaha-nanova ny fifanarahana mando ny tany faha-3 ho endrika mahazatra - ary manana olana lehibe - amin'ny maodelim-piaramanidina Eoropeana. Voasoroka izao ny loza mety hitranga. ”
Nandritra ny fizotry ny fanitsiana, ny ECA dia nampitandrina ny amin'ny fampidirana fampindram-bola tsy misy fetra sy tsy voafetra, tsy misy antoka ampy fa tsy hanararaotana izany. Saingy eo ambanin'ny fifanarahana Trilog vaovao, ny fepetra arahin'antoka fampanarahana mando kokoa dia tsy maintsy ampiharina amin'ireo firenena faha-3 izay manana fifandraisana fiaramanidina matotra sy ny EU. Ireo izay manana fifanarahana fitaterana an'habakabaka miaraka amin'ny Vondrona eoropeanina nanomboka tamin'ny taona 2008 - toa an'i Etazonia - dia mendrika ny hanana izany fotoana an-tsokosoko izany.
Ny Minisitry ny EU dia nanohana an'io fanovana io ary nanamafy ny lahatsoratra tamin'ny alàlan'ny fampidirana ny fitsipiky ny fifamalianana. Recital vaovao izao dia manonona ny 'zon'ny mpamaky sy ny adidy' ho an'ny antoko, izany hoe ny EU sy ny firenena faha-3. Ilaina indrindra io fepetra io. Ny firenena sasany dia manana lalàna nasionaly miaro ny tsena anatiny sy ny asany ary mety hanjary tsy ho azon'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Eoropeana tombony azo avy amin'ny fampindram-bola tsy misy fetra ao amin'ireo tsena ireo, na dia misy fifanarahana mamela aza izany.
“Ny fehiny dia nandray fanapahan-kevitra feno fahendrena ireo minisitra eropeana sy parlemanta. Ny fifanarahana Trilogue momba ny Andininy faha-13 dia hamela ny Vondrona Eropeana sy Etazonia hamaha ny olan'izy ireo tsy manam-paharoa ary hifanaraka amin'ny fiaramanidina mivarotra mando. Mandritra izany fotoana izany dia tsy haondrana any ivelany ny fitomboan'ny tsenan'ny EU sy ny fampiasana ekipazy. Fandresena fandresena izany, ”hoy i Dirk Polloczek.